FBI-da Mareykanka oo sheegtay in ay taqaanay Cumar Mateen oo 50 qof ku diley Orlando ee Gobolka Florida – Djiboutination
HomeNEWS2 FBI-da Mareykanka oo sheegtay in ay taqaanay Cumar Mateen oo 50 qof ku diley Orlando ee Gobolka Florida FBI-da Mareykanka oo sheegtay in ay taqaanay Cumar Mateen oo 50 qof ku diley Orlando ee Gobolka Florida
- June 13, 2016 - in NEWS2 383 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Hay’adda dembi baariska Maraykanka, FBI, ayaa sheegtay in ay saddex jeer wareysatay Cumar Mateen, oo ah ninka ka dambeeyay weerarka ay kontonka qof ku dhinteen ee lagu qaaday kalab ku yaalla magaalada Orlando ee gobolka Florida.
Hay’adda ayaa sheegtay in Cumar loo haystay xiriir uu la sameeyay Munir Abu-Salhaan oo u dhashay Maraykanka, markii dambana isku qarxiyay dalka Suuriya, balse lagu waayay caddeyn lagu maxkamadeyn karo.
Aabaha dhalay Cumar Mateen ayaa sheegay in uu aad u necbaa dadka isku jinsiga ah ee haddana isu galmooda, ayna dhici karto in taasi ay sabab u tahay weerarka uu ku qaaday kalabka ay dadka noocaasi ah isugu tagaan.
Madaxweyne Obama oo ka hadlay weerarka Orlando ka dhacay, ayaa sheegay in uu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi soo mara, waxaana uu tilmaamay in hubka sida sahlan dalkaasi looga helo uu qeyb ahaan weerarka mas’uul ka yahay.
Ninka u muuqda in uu musharraxa madaxtinimo u noqon doono xisbiga jamhuuriga, Donald Trump, ayaa sheegay in Maraykanka ay soo weerarreen argagixiso Muslimiin mintid ah, waxaana uu ku dhaliiyay madaxweyne Obama iyo Hillary Clinton oo u tartamaysa xisbiga dimuqraadiga in aanay hadalka sidaa u dhigi karin.
Previous article Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhigyada AMISOM Next article Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo ku dagaallamay xadka ay wadaagan About the author djibouti